Waqtiga Safarka Marmaray iyo Khidmada | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulMarmaray Expeditional Times iyo Khidmadaha
01 / 06 / 2019 34 Istanbul, DUNIDA, tareenka, GUUD, HAY'ADAHA, Gobolka Marmara, TURKEY, TCDD
Khariidadda Marmaray iyo Halkalı Joojinta iyo Jadwalka Gebze Marmaray: Marmaray, mashruuca isku xiraya Yurub iyo Anatolian Side ee Istanbul Halkalı Waxaad ka heli kartaa dhammaan macluumaadka ku saabsan joogsiyada iyo waqtiyada tareenka Gebze ee ku jira mawduucan. Halkalı Khadka Gebze Suburban 2019 waxaa ka mid ah khadadka dib loo cusbooneysiiyay oo ku dhex jira baaxadda mashruuca Marmaray. Halkalı Warkaan waxaan ku siineynaa macluumaad ku saabsan Xargaha Xariiqda Gebze Metro Line Halkalı Waxaad ka heli kartaa dhammaan faahfaahinta ku saabsan Saacadaha Safarka Marmaray. Waxay ku taal dhinaca Yurub Halkalıwaxayna bilaabaan Gebze. Dhinaca Yurub Halkalı iyo Kazlıçeşme Marmaray, halka kooxda Anatolia ay gaadiid ka qaadayaan inta u dhexeysa Ayrılık Fountain iyo Gebze. Dadka reer Istanbul aad bay u ogyihiin in talaabada ugu horeysa ee mashruucan uu qaaday khadka Kazlıçeşme Separation Fountain kaas oo isku xiraya Anatolian Side iyo Yurub Side.
Waqtiga Safarka Marmaray iyo Kharashaadka ayaa ah sida soo socota. Tareenada maamuli doona inta udhaxeysa MARMARAY GEBZE - HALKALI iyo SÖGÜTLÜÇEŞME - ZEYTİNBURNU waa sida soo socota:
Gebze Halkalı mar daqiiqad kasta 15
Sogutlucesme Zeytinburnu 8 kasta hal mar daqiiqad
Kharashka Gaadiidka Ugu Yar 2,60 1,25 1,85
FULL TREE 5,70 2,75 4,00
hakinta waa Tam dhimis Hari-2
8-14 STATION 3,25 1,55 2,30
hakinta waa BISHII XADDIDAN MARMARAY
Times TICKETS XIRIIRADA KOOXAHA
8-14 STATION 2 3 1
Haddii Istanbulcard loo isticmaalo in kabadan hal qof, hal mar ayaa la soo celiyaa,
Khariidadda Marmaray iyo Gebze Halkalı Marmaray Iskuday iyo Jadwal: Marmaray, mashruuca isku xiraya dhinacyada Yurub iyo Aasiya ee Istanbul Halkalı Waxaad ka heli kartaa dhammaan macluumaadka ku saabsan joogsiyada iyo waqtiyada tareenka Gebze ee ku jira mawduucan. Halkalı Khadka Gebze ee magaalada 2019 wuxuu daboolayaa khadadka dib loo cusbooneysiiyay marka loo eego baaxadda mashruuca Marmaray. Waxay ku taal dhinaca Yurub Halkalıwaxayna bilaabaan Gebze.
Waxaad si sahlan u wadaagi kartaa khariidadan warbaahinta bulshada adoo ku daraya html code goobtaada.
Dhinaca Yurub Halkalı iyo Kazlıçeşme waxay u fidisaa gaadiidka u dhaxeeya Marmaray iyo dhinaca Anatolian ee magaalada.
Dadka reer Istanbul waxay si fiican u yaqaanaan in talaabada ugu horeysa ee mashruucan ay qaadatay gegeda Kazlıçeşme - Ayrılık Çeşmesi oo ku xiran dhinaca Anatoliyaanka iyo dhinaca Yurub.
Halkalı - Sida kor ku xusan, waxaa jira joogsi joogta 42 oo ku yaal tareenka Gebze. Halkalı iyo wadarta guud ee u dhaxeeya joojinta Gebze waxay hoos ugu dhici doontaa daqiiqado 115. Si kooban Halkalı115 daqiiqo oo rakaab ah oo ka tagaya wadada 1 saacadood 55 daqiiqo wuxuu ku jiri doonaa Gebze.
Halkalı Waxaa jira meelo badan oo kala iibsiga ah oo ku yaala Gebze Metro. Halkalı Hoos waxaad ka arki kartaa khadadka metrooga (joogsiga) ee aad ku wareejin doontid khadka metrooga Gebze.
Gebze Halkalı Marmaray Line Shahaadada Ardayda Dhameystiran